Global Voices teny Malagasy » Lisitr’ireo Hira Amin’ny Fetibe 2017 ao Trinidad & Tobago : Fizaràna 1 · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 16 Mey 2017 5:14 GMT 1	 · Mpanoratra Janine Mendes-Franco Nandika miora
Sokajy: Karaiba, Trinite sy Tobago, Mediam-bahoaka, Mozika, Zavakanto & Kolontsaina, Ny Tetezana - The Bridge
Hatramin'izay nahatsiarovako saina dia efa toy ny rà mikoriana ao anatiko ny Fetibe ao Trinidad sy Tobago. Fony mbola zaza, isantaona aho no mifaninana hahazo ilay anaram-boninahitra “Mpanjakavavy Kelin'ny Fetibe”. Tamin'ireo rehetra nisehoako an-tsehatra —nataoko daholo ny zavatra rehetra niainga avy amin'ny volkano Meksikana  ka hatramin'ny gana kely mibilabila lasa vano tsara tarehy  an'i Hans Christian Andersen— fa ilay fiakanjon'ny “Mpitantara angano tamin'ny Water Babies (ireo Zanadrano) ” no tena nahazoako ilay anaram-boninahitra sy ilay tombon-dahiny hiakatra ny sehatra tao amin'ny Kianjan'ny Mpanjaka ao Savannah (ilay Lamekan'ny firenena ho an'ireo fankalazana ny Fetibe) nandritry ny alin'ny Alahady Matavy .
Ho an-jaza iray fito taona, ny mitompo ny sehatra toy izany ao anatin'ny “Big Yard” milahatra amin'ireo lehibe mpifaninana ho Mpanjakalahy na Mpanjakavavy, sy ireo mpiangaly gadona calypso dia tena zavamahagaga manokana mihitsy, famonosana ny angovo, fampisehoana ary firaisankina mandritra ilay fetibe maharitra andro roa voafehy ho anaty fehezana iray. Araka ny ambaran'ilay kintan'ny gadona soca, Faye Ann Lyons, “dat [that] is Carnival – ‘zany no fetibe aminy” —ary raha mahavariana ny fitafy, tsy misy na inona na inona mitranga rehefa tsy eo ny mozika.
Tamin'ny 2016, somary vaovao anaty lisitra, Aaron St Louis (fantatra amin'ny hoe Voice) no nitondra nody ny ilay anaram-boninahitra International Soca Monarch  be mpitsiriritra, ka nametraka araka izany ny tenany ho toy ny hery iray mila raisina anaty kajy. Tsy inona no maha-goavana io hira io—fa ny hafatra. Milaza izy fa nipoitra avy amin'ny tsy nisy, saingy ny fianakaviany no nankahery azy tamin'ny nofinofiny sy niantoka izay hahatafitany ny asa sarotra nilaina namadihana an'ireny ho zavatra mivaingana. Manome voninahitra ny fifamatorana mafy misy eo anivon'ny ankohonana ilay hira, ny finoana ny hery faratampony ary ny toetsaina miabo. Ao anaty firenena iray izay mazàna ireo tanora, ireo lehilahy mainty no iharan'ny fitsaratsaram-poana , tiako mihitsy ilay hoe i Voice nanao fanamby tamin'ilay tantara.
Hatramin'ny fahagola ny fetibe no fotoana tsy fanarahana fitsipika, indrindra rehefa fifandraisan'ny lahy sy ny vavy no resahana . (Raisina ho azo ekena tanteraka toy ny “fandihy ‘vine’ ” (fomba fandihy misangodingodina) eny ambony olona na zavatra rehetra eny : samy lalao ara-drariny avokoa na lahy, vavy, manampahefan'ny polisy, andrin-jiro, fiara mitondra mozika. Ary ity no tena zavatra: tsy mila maka alàlana ianao. Toy ny “karatra fanafahana avy any am-ponja” ilay izy.
Indraindray tsy misy ny fifandratràna ary ao anatin'ny fanahin'ny firavoravoana, saingy koa miseho indraindray ny hoe miaina anaty faritra iray izay be herisetra an-tokantrano sy sotasota ara-nofo izahay: tsy ela akory izay, niparitaka be ny #LifeinLeggings — tenifototra iray nampiasain'ireo vehivavy hizaràna ny tantaranà fanararaotana ara-nofo niainan'izy ireo. Samy manana tantara ny vehivavy tsirairay. Ary ny ankamaroan'ny vehivavy dia manana tantara iray mifamatotra amin'ilay Fetibe. Tsaroako indray marainan'ny J'ouvert  (marainan'ny Alatsinainy alohan'ny Talata Matavy), vonton'ny loko manga nataon'ny Devoly Manga iray aho, izay nihevitra fa toerana tsara hamendrahana ilay taharo ny teo amin'ny nonoko. Tamin'io fotoana io aho nanohitra, dia lasa izy nandeha. Tamin'io J'ouvert io ihany, nisy vahiny iray tonga “handihy vine”—ho amin'ny tombontsoany, nefa nivandravandra be aho fa tsy narisika hamaly ilay dihy, niala tsiny izy. Nanome fanantenana ahy izany, tsy misy hafa amin'ny nataon'ity hira ity. Ao anatin'ity fampiarahampeon'i Destra sy Farmer Nappy ity, mifanolotra fahalalahana ireo mpihira roa “fahalalahana feno handihy ‘vine’ amiko, fahalalahana feno hanorotoro ahy, fahalalahana feno hiantso ahy raha sendra ketraka ianao.” Fanekena: misy fotokevitra iray izay hitondra miakatra ny zon'ny vehivavy.
“Na lavitra aza ny làlana, tsy olana izay hiseho, haiko fa ho vitanao io.” Amin'ireny fotoana mahavery fanantenana ireny, manjelanjelatra toy ny angamenavody eo ambonin'ny alinà karaibiana ireo teny ireo. Ny gadona Afrikàna manaitaitra sy ireo hiran'ny “feon-dakolosy” dia manana lokonà tontolom-panahy Batista izay mitondra ny zavatra iainana amin'ilay Fetibe ho aminà haavo ara-pinoana mitovy amin'ilay “High Mas”  nataon'i David Rudder taona maro lasa izay. Tena tsy hay tohaina ilay hira, hany ka na ireo mpiteny amin'ny radio aza dia mivazivazy momba ireo mpamonjy fety “misambotra fahefana” rehefa alefa any amin'ireo fety ilay izy. Ny vazivazy eo ihany, fa mifandray akaiky amin'ny resaka fanahy ny fiavian'ny Fetibe. “Carne vale” midika ara-bakiteny hoe “fanaovana veloma mandrakizay ny nofo”, fotoanan'ny fientanentanana farany mialoha ny Karemy. Tonga dia mamerina ny Fetibe ho any amin'ny fototra niaviany io hira io ary maka azy avy ao anatin'ny fanahy feno fahasahian'ny Canboulay  izay fon'ilay fetibe.
Ananan'ity iray ity daholo ireo taharo hahatonga ny soca ho gadona tonga lafatra, ary tsy mandiso fanantenana. Ny fiarahan'ny calypso sy ny fiandrianan'ny soca—ilay ramatoa lehibe amin'ny calypso, Calypso Rose  ary ilay tanora mpanjakan'ny soca, Machel Montano —dia miasa tsara ho tetezana hamenoana ny banga eo amin'ireo andian-taranaka. Tampoka teo, lasa nahazo endrika maoderina ilay “ay yi yi” kaiso  fanao fahiny, ary ny singan'ny soca dia norefesina ho toy ny feno fanajàna kokoa. Na ianao aza mahita ny tenanao “midoladolan” ny gadona milamina eny an'arabe amin'ity hira ity, mifanohitra amin'ny gadona romodromotra mahazatra, ny fandeha feno herin'ny aerobic-n'ny ankamaroan'ireo soca amin'izao andro izao. Raha mihaino tsara ianao, afaka renao ny feo beso amin'ilay “Sugar Bum Bum” an'i Lord Kitchene. Fihetsika amin'ny loha atao amin'ny fototra niavian'ny calypso io hira io na ohatra aza ka manokatra varavarana aminà zotra mozikaly vaovao sy misy asa famoronana. Fanavaozana mahafinarita: nomen'i Calypso Rose alàlana ny hampiasàna ilay hira ao anaty fanentanana iray  hisarihana ny saina ho amin'ny herisetra atosiky ny maha-lahy na maha-vavy ao Trinidad sy Tobago. Amin'ny alàlan'ireo tenifototra #leavemealone  sy #leaveshealone , mizara ny tantarany ireo vehivavy ary ireo lehilahy kosa amporisihana ho tomponandraikitra sy hampandray andraikitra ireo lehilahy toa azy.
Raha misy mpanakanto mametraka mandrakariva ny dian-tànany amin'izay maha-Trinidad manontolo an'i Trinidad ankehitriny dia i David Rudder , izay mahavita mandrakariva ny manafangaro ireo tononkira hendry aminà gadona azonao hihetsehana. Ao anatin'io kalo madinika feno fahendrena io, asehony ny fiasàna lohan'ny firenena manoloana ny resaka foko (race), amin'ny alàlan'ny fampivadiana azy amin'ireo zavatra rehetra ihazakazahan'ny Trinidadiana (race to), “ny fivarotan-toaka”…ny lasy mas, ny fihazakazahana hamaky tratra”. Amin'ny teny efatra tsotra—hakanosàna, afo, fanamelohana, ary faniriana—velabelarin'i Rudder ny fahasarotan'ny “tsy fankatoavana La Trinity”. Tsy mitati-bolana velively ny halemen'ny fireneny izy. Fa ho solon'izay aza, asehony miavaka tsara ny antony mahatonga ireo Trinidadiana mijanona ao na dia eo aza ireo fanamby marobe: “Atsangano ny tànanareo, fa aza miala vehana mihitsy..Trinidad ity….ataovy ambony ny tànana, fa aza miala vehana velively… araka ilay ireventsika azy.”
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2017/05/16/99913/
 volkano Meksikana: https://en.wikipedia.org/wiki/Popocat%C3%A9petl
 gana kely mibilabila lasa vano tsara tarehy: https://en.wikipedia.org/wiki/The_Ugly_Duckling
 Water Babies (ireo Zanadrano): https://en.wikipedia.org/wiki/The_Water-Babies,_A_Fairy_Tale_for_a_Land_Baby
 Alahady Matavy: https://en.wikipedia.org/wiki/Trinidad_and_Tobago_Carnival#Competitions
 “dat [that] is Carnival – ‘zany no fetibe aminy”: https://www.youtube.com/watch?v=5PN-AAp-QHI
 rehefa fifandraisan'ny lahy sy ny vavy no resahana: https://globalvoices.org/2014/02/14/trinidad-and-tobago-the-soca-kings-play-songs-of-anti-love/
 hampiasàna ilay hira ao anaty fanentanana iray: https://www.facebook.com/groups/womantra/permalink/1242789189132805/?match=bGVhdmUgbWUgYWxvbmUsd29tYW50cmEsY2FtcGFpZ24sYWxvbmUsbGVhdmU%3D